ဧရာဝတီမြစ်ကြောတလျှောက် သဘောင်္ကို ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး ခရီးနှင်နေတဲ့ ယွန်းယွန်း - Zeekwat Hot News
September 10, 201906141
ကလေးသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ယွန်းယွန်းဟာ သရုပ်ဆောင်မှုမှာ သြော် ချရလောက်အောင် ကျွမ်းကျင်တာကြောင့် မြန်မာ့အနုပညာလောကမှာကော ပရိသတ်များရင်ထဲမှာပါ ပြည့်နှက်စွာ နေရာယူထားနိုင်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်များ တိုက်စားမှုများကြောင့် အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ယွန်းယွန်းဟာ ငယ်ရုပ်လေးမပျောက်ပေမယ့်လို့ မိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ လှပမှု အသွင်ပုံရိပ်များကတော့ တိုးမြဲတိုးဆဲ လှသွေးကြွယ်ခဲ့တာကြောင့် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများရဲ့ အားပေးမှုများကိုပါ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ယွန်းယွန်းက အနုပညာအလုပ်များကိုတစ်ဖက် ပညာရေးကိုပါ ထူးချွန်အောင်လုပ်ကိုင်နေရတာကြောင့် အားလပ်ရက်ရတုန်းလေးမှာ ပြည်တွင်းခရီးလေးများကို သွားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ယွန်းယွန်းက လက်ရှိမှာ ဧရာဝတီမြစ်ရေပြင်ကို ရောက်ရှိနေပြီး သဘောင်္ကို ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး နောက်ပြောင်ပျော်ရွှင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ယွန်းယွန်းက “မသိဘူး.. သင်္ဘောတွေကိုယ်တိုင်တက်မောင်းနေပြီ!! စီးရဲရင် လိုက်ခဲ့ပါ 😜🧡🛳” ဆိုပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စတေးတပ်လေးနဲ့ သဘောင်္ပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံလေးများကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။
ဇီးကွက်ပရိသတ်ကြီးရေ .. ယွန်းယွန်းကတော့ မျက်စိအောက်မှာပဲ အရွယ်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး အရမ်းလည်း ချောလာခဲ့ပါတယ်နော်။ ယွန်းယွန်းကို ချစ်ရင် အားပေးစကားလေးတွေ ပြောခဲ့ဦးနော်။
Source : Yoon Yoon Facebook
ကလေးသရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ယှနျးယှနျးဟာ သရုပျဆောငျမှုမှာ သွျော ခရြလောကျအောငျ ကြှမျးကငျြတာကွောငျ့ မွနျမာ့အနုပညာလောကမှာကော ပရိသတျမြားရငျထဲမှာပါ ပွညျ့နှကျစှာ နရောယူထားနိုငျသူလေး ဖွဈပါတယျ။ အခြိနျမြား တိုကျစားမှုမြားကွောငျ့ အရှယျရောကျလာပွီဖွဈတဲ့ ယှနျးယှနျးဟာ ငယျရုပျလေးမပြောကျပမေယျ့လို့ မိနျးကလေးတဈဦးရဲ့ လှပမှု အသှငျပုံရိပျမြားကတော့ တိုးမွဲတိုးဆဲ လှသှေးကွှယျခဲ့တာကွောငျ့ အမြိုးသားအမြိုးသမီးမြားရဲ့ အားပေးမှုမြားကိုပါ တဈပွိုငျနကျတညျး ရရှိလာခဲ့ပါတယျ။
ယှနျးယှနျးက အနုပညာအလုပျမြားကိုတဈဖကျ ပညာရေးကိုပါ ထူးခြှနျအောငျလုပျကိုငျနရေတာကွောငျ့ အားလပျရကျရတုနျးလေးမှာ ပွညျတှငျးခရီးလေးမြားကို သှားဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ ယှနျးယှနျးက လကျရှိမှာ ဧရာဝတီမွဈရပွေငျကို ရောကျရှိနပွေီး သဘောင်္ကို ကိုယျတိုငျမောငျးပွီး နောကျပွောငျပြျောရှငျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
ယှနျးယှနျးက “မသိဘူး.. သင်ျဘောတှကေိုယျတိုငျတကျမောငျးနပွေီ!! စီးရဲရငျ လိုကျခဲ့ပါ 😜🧡🛳” ဆိုပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ စတေးတပျလေးနဲ့ သဘောင်္ပျေါမှာ ပြျောရှငျနတေဲ့ ပုံလေးမြားကို မြှဝလောခဲ့ပါတယျ။
ဇီးကှကျပရိသတျကွီးရေ .. ယှနျးယှနျးကတော့ မကျြစိအောကျမှာပဲ အရှယျရောကျလာတာဖွဈပွီး အရမျးလညျး ခြောလာခဲ့ပါတယျနျော။ ယှနျးယှနျးကို ခဈြရငျ အားပေးစကားလေးတှေ ပွောခဲ့ဦးနျော။